Onye na-emepụta ihe mkpuchi akwụkwọ n'ogbe |Futur
Fl-PL90PLA Akwụkwọ 90mmMkpuchi Dabara 6/8/12T oz Akwụkwọ Bowl 1000 (20*50pcs)
Fl-PL97PLA 97mm akwụkwọMkpuchi Dabara 8U/12S/16T oz Akwụkwọ Bowl 1000 (20*50pcs)
Fl-PL115PLA Ihe mkpuchi akwụkwọ 115mm Dabara 12/16/24/32 oz Mpempe akwụkwọ 1000 (20*50pcs)
Dị larịịakwụkwọ mkpuchi.FUTUR ọkwá bụ ngwakọta pụrụ iche & ụdị egwuregwu maka ụdị kacha mma na ụdị dị iche iche.Echiche panoramic nke mmanụ oriri gị.Ihe mkpuchi ventilashị maka nri ọkụ ka ọ gaa.bọọdụ na-adịgide adịgide nwere mkpuchi PLA dabere na osisi.Ejiri osisi mee ya.Compostable n'ahịa ebe anabatara ya.
Mkpuchiakwụkwọmere site na akwụkwọ enweghị akarama kpuchie yaPLAihe bioplastic mere site na osisi, ọ bụghị mmanụ.A na-eji mkpuchi bioplastic mere site na osisi, ọ bụghị mmanụ.Ha dị mma maka nri ọkụ na oyi na mmiri mmiri.Enwere ike ịgbakọ ụlọ nrụpụta akwụkwọ ikike.
Kacha mkpofumkpuchina-mere nke plastic.It na-ewekarị afọ 200 ka ọ na-eweda ya n'ụzọ nkịtị.Ọ na-ebibi ala ala ma na-esi ike imebi onwe ya mgbe a tụfuru ya, na-akpata nsogbu gburugburu ebe obibi ogologo oge.Na-emepụta anyịakwụkwọ mkpuchispụta na80% obere ikuku griin haus karịa rọba ọ na-anọchi anya ya.
Anyị na-eji bọọdụ dị arọ, nke adịchaghị mma na-enye anyịmkpuchi akwụkwọnkwụsi ike ka elu, mma mkpuchi dabara na mkpuchi.Akwụkwọ anyịmkpuchina-ahaziri dị ka anyịakwụkwọ eferesize, adabara anyị niile ofeakwụkwọ eferes & nnukwu efere akwụkwọ.
Ha na-adabara ma na-ekpo ọkụ na oyiefere akwụkwọma bụrụ ofe na-echekwa ihe ọzọ dị na gburugburu ebe obibi dị ka nke nkịtịmkpuchi plastik.
Ebipụtara ya site na iji ink dabere na soy ma ọ bụ nke dabere na mmiri.Efere ndị a bụ compostable n'ebe a na-ere ahịa.
A na-ahụta ihe na-adọrọ adọrọ anya n'aka onye ahịa mgbe ọ bụla ndị ọzọ na-ahụ ya.Dị n'ụdị ọkọlọtọ ụlọ ọrụ dị iche iche, mkpuchi akwụkwọ anyị nwere ike ibipụta nke ọma iji kwalite ika gị.
Dị iche iche nha si 90mm & 97mm.Dabara efere akwụkwọ ofe FUTUR.
Ihe mkpuchi akwụkwọ nwere ike ịgbakọ na nke enwere ike ịmegharị ya.
· Nhazi & ebipụta ahaziri iji mee ka akara gị pụta ìhè.
· Mpempe akwụkwọ kraft
Nke gara aga: Mpempe akwụkwọ ofe
Osote: CPLA mkpuchi